यसकारण भाइरल पुरुष जोडी रुदै मिडियामा आए ! – दैनिक नेपाल न्युज
यसकारण भाइरल पुरुष जोडी रुदै मिडियामा आए !
काठमाडौका एक युवा अनि झापाका अर्का युबाबिचको घनिष्ट प्रेम छुट्नै नसक्ने गरि बस्यो । सुन्दै अनौठो लाग्ने उनिहरुको कहानी सायद कमैलाई थाहा होला । केटाकेटाबिचको प्रेम सम्बन्ध परिवारलाई भन्दा समेत कसैले स्विकार नगरेपछी अन्ततः उनिहरुले भागेर बिबाह गर्ने निर्णय गरे अनि भागेर बिबाह पनि गरेर दमकमा कोठा भाडामा लिएर बस्न थाले । त्यो समयको अन्तरालमा उनिहरुले धेरै दुख कस्ट र समाजबाट अपहेलना सहनुपर्यो भन्छन उनिहरु ।
एकाएक सुपर अनलाइन टिभिका समीर सुबेदीले उनीहरुलाई मिडियामा ल्याएपछी एकपछी अर्को मिडियामा छाउन थाले अहिले त सायदै नचिन्ने कमै छन । यति धेरै समाजलाई अनि हरेक मानिसलाई उनिहरुले बुझाउदै गए धेरैले त उनिहरुको बारेमा बुझ्दै गएको पाइयो तर काठमाडौका अनुभवको घरबाट अझै बोलाइएको छैन । स्वीकार गरिएको छैन । रुपक र अनिभब एक्कासि रुदै मिडियामा आएर यस्तो सम्म भने तल भिडियोमा हेर्नुस् ।
निर्माणाधीन सिमेन्ट उद्योग बाढीले बगायो, पाँच मजदूर बाढीमा फसे